skpari: बसुंन्धारा पुजाका केही झलकहरु
बसुंन्धारा पुजाका केही झलकहरु
हरेक साल आजको दिनमा नै मनाऊँदै आएको बसुंन्धारा पूजा हिजो देखी यहाँ पूजा आजा गर्दै भक्तजनहरु ब्रतबसी आज दिऊसो करिब १२ बजे बाट परिक्रमा सुरु भै पाटनको बिभिन बाहाल तथा टोलहरुको परिक्रमा गरि साँझ संम्पन भयो। यस बसुंन्धारा पूजाको आयोजना पाटनका बिभिन बाहालको टोलहरुले बर्षको पालै पालो गर्दै मनाऊँदै आईरहेको एउटा धार्मिक सांस्कृति कार्यक्रम मध्ये एक हो। यस पालि बसुंन्धारा पूजाको आयोजना गर्ने पालो पुल्चोकलाई परेको थियो।
यहाँ यस्तै पूजाहरु मध्ये गणेश पूजा, भिमशेन पूजा, कृष्ण पूजा अनि मतया पूजा पनि प्रमुख हुन्। यस पूजाहरुको पनि आयोजना बसुंन्धारा पूजा जस्तै हरेक बर्ष बिभिन टोलले पालै पालो गर्दै आयोजना गरि मनाऊने गरिन्छ।
गुण को-अपरेटिभ लि. ले आजको यस पूजाको लागि संम्पूर्ण फाईन्सियल स्पोण्सर गरको थियो।
त्यस्तै केहि दिन पहिले पाटनमै सम्पन भएका मतयाको पनि केहि झलकहरु
अनि यो तलका फोटोहरू हर्नुस त के यो सांचैकै कुनै कपडाले बनाएको ड्रेस हो या क्यामेरा र फोटोग्राफरको चलाखी मात्र हो..?
फोटोहरु हेर्नु भै तपाईहरु आफै पता लगाऊँनुस….। वाटर फोटो नामाकर्न गरिएको यो फोटोहरु मैले आफ्नो फेशबुकमित्र एकजनाको ग्यालेरीबाट लिएको हुँ।
at Tuesday, September 08, 2009 Labels: धर्म र संस्कृति
धेरै राम्रो फोटोहरु अनि जानकारी मुलक टाँसोको लागी धन्यबाद SKPARI jee.